China Truck Side Mirror PK9883 Mpanamboatra sy mpamatsy | Tetezana Andrefana
Ny kalitaon'ny PK9883 avo lenta dia fitaratry ny kamio ho an'ny Hyundai 91A & Daewoo 365T. Ny teknolojia ambonin'ilay fitaratra dia nopetahany chrome, izay afaka misoroka tsara ny famirapiratanana ary mahazo aina ny mpamily. Mamokatra ny faritra rehetra izahay amin'ny fitaratry ny kamiao, ny vatan'ny kamiao, ny kojakojan'ny kamio ho an'ny BENZ, ho an'i Volvo, ho an'i Scania, ho an'i Man, ho an'ny DAF, ho an'i Iveco, ho an'i Renault.
Ny kalitaon'ny PK9883 avo lenta dia fitaratry ny kamio ho an'ny Hyundai 91A & Daewoo 365T. Ny teknolojia ambonin'ilay fitaratra dia nopetahany chrome, izay afaka misoroka tsara ny famirapiratanana ary mahazo aina ny mpamily. Mamokatra ny faritra rehetra izahay amin'ny fitaratry ny kamiao, ny vatan'ny kamiao, ny kojakojan'ny kamio ho an'ny BENZ, ho an'ny Volvo, ho an'i Scania, ho an'ny olona, ​​ho an'ny DAF, ho an'ny Iveco, ho an'ny Renault. Mifantoka amin'ny famolavolana sy fanamboarana fitaratra sy kojakoja ho an'ny fiara-fiara. Vokatra plastika vita amin'ny mpamokatra entana sy OEM / ODM. Afaka manome ny santionany izahay raha manana Ny ampahany vonona amin'ny tahiry, fa ny mpanjifa kosa dia tsy maintsy mandoa ny vidin'ny santionany sy ny vidin'ny mpandefa entana. Manana ny lazany ambony izahay, ny kalitao tsara indrindra ary ny serivisy hatramin'ny nanombohan'ny orinasanay.
FAMPIHARANA Hyundai 91A & Daewoo 365T
Teo aloha: Fiara fitateran'ny kamiao PK9849